पहाडमा ऐना राखेर गाउँ नै उज्यालो बनेको शहर ! « Lokpath
२०७७, १३ पुष सोमवार २१:५३
पहाडमा ऐना राखेर गाउँ नै उज्यालो बनेको शहर !
प्रकाशित मिति : २०७७, १३ पुष सोमवार २१:५३
काठमाडौं । सूर्य उर्जाको श्रोत मात्र होइन, जीवनका लागि अभिन्न अंग पनि हो । तर पृथ्वीमा यस्ता पनि केहि स्थानहरु छन्, जहाँ वर्षमा केहि महिनामात्र सूर्यको प्रकाश देख्न पाइन्छ ।
त्यस्तै एउटा ठाउँ हो, आर्कटिक सर्कलको उत्तरमा स्थित नर्वेको टाम्स शहर । जहाँ हरेक वर्ष नोभेम्बरदेखि जनवरीसम्मको तीन महिना सूर्यको प्रकाश देख्न पाइदैन ।
उत्तरी गोलार्द्धमा रहेका कारण यो ठाउँले भौगोलिक नोक्सान सहनु परेको छ । त्यसबाट दक्षिणमा जाने हो भने नर्वेको रजुकान गाउँ आउँदछ ।
उक्त गाउँ ६ महिनासम्म बिना सूर्यको प्रकाश रहन्छ । त्यसको कारण हो गाउँको दुबै तिर रहेका ठूला दुई पहाड । जसका कारण त्यहाँका मानिस ६ महिनासम्म सूर्यको प्रकाश बिना नै जीवन यापन गर्दछन् । तर टेक्निक विशेषज्ञहरुले यो समस्याको समाधान ऐनाबाट गरेका छन् ।
उक्त समस्याको समाधान सूर्यको प्रकाशको दिशामा पहाडमा ठूला सन मिरर लगाएर हल गरेका हुन् । जसका कारण सूर्यको प्रकाश परावर्तित भएर गाउँमा उज्यालो छाउने गर्दछ ।
सूर्यको प्रकाश नदेख्दा दुखी बनेका मार्टिन एन्डरसनले रजुकानमा स्थानीय अधिकारीहरुसँग मिलेर ८ लाख डलरको लगानीबाट सन मिरर पहाडमा लगाउँदै गाउँलाई उज्यालो बनाएका हुन् ।
ऐना एन्डरसनले पहाडमा राखे पनि यो आइडिया भने एक शताब्दी पहिला नै इन्जिनियर स्याम हाइडले निकालेका थिए । सन् १९२८ मा केवल कारको माध्यमबाट सूर्यको दर्शन गर्न त्यहाँका मानिसहरु माथिसम्म जाने गर्दथे । तर अहिले त्यहाँ दिनैभरी सूर्यको प्रकाश देख्न सकिन्छ ।
यो ऐना ५३८ वर्ग फुट क्षेत्रमा लगाइएको छ, जसले शहरको २१५० वर्ग फिट क्षेत्रलाई उज्यालो बनाएको छ । बाँकि क्षेत्रमा भने अन्या श्रोतबाट उज्यालो बनाइएको छ । उज्यालो आएसँगै रजुकानमा पर्यटनहरु बढ्न थालेका छन् ।
सेलिब्रेटीले प्रेग्नेन्सीबाट करोडौँ कमाउँछन्, तर कसरी ?
काठमाडौं । आजभोलि मानिस आफ्नो मन पर्ने सेलिब्रेटीको पर्सनल लाइफमा के भइरहेको छ
काठमाडौं । सोसल मिडियामा हरेक दिन कुनै न कुनै भिडियो भाइरल बनिरहेको नै
कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू गरिएको दिन कति थपिए संक्रमित…
गृहसचिवले किन भेटे अनशनरत गंगामायालाई ?
सावधान ! रातमा निन्द्रा बिथोलिरहन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण